October 2017 - Puntland Mirror Believable Media Website
October 30, 2017 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in aysan waxba ka jirin in wax qiimo ah lagu kordhiyay ganacsatada badeecada kala degta dekada Boosaaso. Shir saxaafadeed ay Boosaaso ku qabteen maanta oo Isniin ah wasiirka dekadaha Puntland […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirkii Warfaafinta ee ugu horeeyay Puntland Cawad Axmed Casharo ayaa ku geeriyooday dalka Canada maanta oo Isniin ah, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisa. Marxuum Casharo ayaa kaalin weyn kasoo qaatay dhismaha dowladda Puntland sanadkii […]
Garowe-(Puntland Mirror) The first Minister of Information of Puntland Awad Ahmed Asharo has passed way in Canada on Monday, his family confirmed. The late minister played a major role in the formation of Puntland state […]
October 29, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa maanta oo Axad ah si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Saiciid […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Soomaaliya ayaa shaqada ka ceyrshay taliyihii booliiska Cabdixakiin Daahir Saacid iyo agaasimihii nabadsugida Cabdulaahi Maxamed Sanbalooshe. Golaha ayaa go’aankan qaatay kadib kulan deg deg ah oo ay ku yeesheen Muqdisho maanta […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s cabinet ministers fired police chief Abdihakin Dahir Saed and intelligence director Abdullahi Mohamed Sanbalooshe. The cabinet took the decision after an emergency meeting in Mogadishu on Sunday. The move came a day […]
October 28, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 qof ayaa ku geeriyooday qarax uu waday qof is-miidaamiyay oo lala beegsaday huteelka Naasahablood ee Muqdisho maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka iyo caafimaadka ah. Daqiiqado […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least 10 people were killed after a suicide car bomb was rammed into Naasahablood hotel in Mogadishu on Saturday, security and medical sources say. A few minutes later a car bomb exploded […]
Ankara-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in saldhiga milatariga Turkiga uu ka dhisay gudaha Soomaaliya uu kaalin ka qaadan doono dhismaha ciidanka Soomaaliya. “Saldhiga tababarka ee Turkiga wuxuu taageero ka geysan doonaa […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya kaasoo la qorsheeyay in 28-ka October uu ka dhaco Muqdisho ayaa dib u dhacay, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid […]